» दु:खद खबर ! “दुखी पिडितहरुको भगवान “सन्तोष देउजा को दुवै मिर्गौलामा समस्या , भाबुक हुदै मागे माफी (भिडियो हेर्नुहोस) दु:खद खबर ! “दुखी पिडितहरुको भगवान “सन्तोष देउजा को दुवै मिर्गौलामा समस्या , भाबुक हुदै मागे माफी (भिडियो हेर्नुहोस) – हाम्रो खबर
दु:खद खबर ! “दुखी पिडितहरुको भगवान “सन्तोष देउजा को दुवै मिर्गौलामा समस्या , भाबुक हुदै मागे माफी (भिडियो हेर्नुहोस)
सन्तोष देउजा सबै नेपालीहरु बीच चिरपचित नाम हो । उहाँ आफ्नो मेहेनत र सच्चा कर्मले चिनिएका एक महान ब्यक्ती हुन । उहाले समाजको हितको लागि विभिन्न कार्य गर्दै आउनु भएको छ। उहालाइ यतिखेर कि,डनिमा स्टोन भएर अस्प,तालमा भर्ना हुनुन्छ ।
आज भन्दा १६ वर्श पहिले उहालाइ कि,ड्निमा स्टो,न भएको रहेछ । त्यही स’मस्या हाल उब्जिएर उहालाइ गार्हो भएको रहेछ । त्यसैले अहिले आफू उपचारका लागि अस्पतालमा आराम गरिरहेको कुरा बताउनु भएको छ ।
धेरै स्वदेशी तथा बिदेशी शुभ चिन्तकहरु, आफन्तहरुले के भयो भनेर सोधिखोजी गरिरहेकाले आफ्नो स्वा’स्थ अ’वस्था बारे जानकारी दिन आफू लाइभमा आएको बताउनुहुन्छ । थप उप,चार गर्नुपर्ने हुदा आराम गरिरहनु भएको छ ।
उहाको दुबै मृ,गौलामा स’मस्या देखिएको र् स्वास्थमा असर परेको बताउनुहुन्छ ।उहाले आफुलाई माया गर्ने समपुर्ण शुभचिन्तकहरुलाइ धन्यवाद दिनु भएको छ । आफू अहिले सामान्य अवस्तामा रहेको बताउनुहुन्छ । थप उपचारका लागि उहाको पहल भईरहेको बताउनु भयो ।